सुत्नु अघि आफैँलाई सोध्नुस यी ५ प्रश्नहरु- GoodNews24 – GoodNews24
Home/गुड न्यूज 24/सुत्नु अघि आफैँलाई सोध्नुस यी ५ प्रश्नहरु- GoodNews24
गुड न्यूज 24शिक्षा स्वास्थसफल कथा
सुत्नु अघि आफैँलाई सोध्नुस यी ५ प्रश्नहरु- GoodNews24
शरीरको आरामको लागि निद्रा अपरिहार्य चिज हो साथै हाम्रो दिनचर्याको महत्वपूर्ण अंग पनि हो तर कहिलेकाहीँ हामी निदाउन सक्देनौं । अहिले मान्छेहरुमा निद्रा नलाग्ने समस्या निकै बढेको छ। कोही मान्छे आठ घण्टाभन्दा बढी सुतेर पनि निद्रा नपुगेको बताउँछन्। ऊ धेरै समय सुतेको छ भन्दैमा उसको निद्रा ठीक छ भन्न मिल्दैन। कोही मान्छे चार घण्टा सुतेर पनि एकदम फ्रेस भएको अनुभव गर्छन्। मान्छेको व्यक्तित्व र आनीबानी अनुसार कसैलाई धेरै सुत्न पर्छ, कसैलाई थोरै।
दिनभरी काम गरेपछि हामी थाक्छौं । हाम्रो शरीरको उर्जा पनि कम हुँदै जान्छ । यसका लागि आरामको आवश्यकता हुन्छ । शरीरलाई आराम दिनका लागि हामी सुत्छौं। राम्रो सँग निदाउनको लागि दिन भरि भोगेका तिता अनुभवलाई बिर्सन सक्नुपर्छ । भोलिको बारेमा सोचेर चिन्ता लिने र बितेको कुरा मनमा लिइ राख्नाले सबैको निन्द्रा त्यति सुखद हुदैन त्यसैले सुत्नु अघि आफैले आफैलाई केहि यस्ता प्रश्न गर्नुहोस जसले तपाइँलाइ सान्त्वना साथै निर्धक्क भएर आराम गर्ने र भोलिको लागि सकरात्मक बन्ने उर्जा देओस ।
१ ) आज के सिक्नु भयो ?
हरेक दिन हामी केहि नयाँ कुराको अनुभव गर्छौ, थाहा नभएका चिजहरु सँग परिचित हुन्छौ । देखे भोगेका कुराहरु सबै राम्रा हुन सक्दैनन् , त सबै नराम्रा पनि हुदैनन् । राम्रा कुराले त खुशी अवश्य दिन्छन नै तर नराम्रा कुराले केहि पाठ पनि सिकाइरहेका हुन्छन । जव हामी आरामको लागि बेडमा जान्छौ तव दिउसो भोगेका राम्रा कुरा याद गर्नाले तपाइको दिमागलाई ताजा बनाउँछ । त्यस्तै नराम्रो कुराबाट के सिक्नु भयो त्यो कुराको विश्लेषण गर्दा तपाईलाई पश्चाताप महसुस हुन्न र तपाइँ राम्रो सँग निदाउन पनि सक्नुहुन्छ ।
२) अरुलाई सहयोग गरे ?
जहिले हामी केवल आफ्नो बारे सोच्छौ ,आफ्नै बारे चिन्ता लिन्छौ ,यो बिर्सिन्छौ कि आफु वाहेक हाम्रो अरु आफन्त शुभ चिन्तक पनि छन् । आज मैले कसलाई सहयोग गरे ? यो प्रश्नले तपाइलाइ आफ्नो बारेमा मात्र सोच्न बाट रोक्दछ । आज मैले के पाए भन्दा पनि आज मैले कसलाई के दिए यो सोच्नुहोस । सधै आफुले पाएर मात्र खुशी हुने प्रवित्तिले आफैलाई दुखि बनाउछ अरुलाई दिएर खुशी हुने व्यक्ति सधै खुशी र सुखी हुन्छ ।त्यस्तै समस्या आइ पर्छन हरेक दिन आज आएको समस्यालाई कसरि समाधान गरे भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुहोस यसले तपाईलाई अझ समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नमा पोख्त बनाउनसक्छ। म पनि कम छैन म गर्न सक्छु भन्ने भावनाको बिकसित हुन्छ । आफु र आफ्नो जीवन प्रति सधै सकारात्मक बन्न सहयोग गर्दछ ।
३ ) के के सकारात्मक कुरा भए ?
सकारात्मक सोच्नु मानसिक स्वास्थ्यको लागि निकै नै फाइदाजनक हुन्छ यद्यपि जिन्दगीमा हरेक कुरा सकारात्मक हुदैनन् तर जे कुरा सकारात्मक भएनन् त्यसको बारेमा सोचेर चिन्ता लिएर केहि हुनेवाला छैन बरु यसले तपाइको आगामी दिनको लागि खराब असर पार्छ । सुत्नु अघि आज तपाइँ सँग के के राम्रा कुरा भए त्यसको बारे सोच्नुस यसो गर्नाले तपाइलाई उत्प्रेरणा मिल्छ साथै दिमागमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्छ ।
४) मेरो उद्देश्यको नजिक ल्यायो ?
हामी सबै एउटा न एउटा लक्ष्य बोकेर अगाढी बढिरहेका हुन्छौ । हाम्रो दैनिक जिवनमा आउने उतार चढावले कहिलेकाही हामीलाई उदेश्य बाट टाढा पुर्याईदिएको आभास गराईदिन्छन र हामी निराश बन्न पुग्छौ। त्यसैले सुत्नु अघि सोच्नुहोस आज के त्यस्तो चिज गर्नु भयो जसले तपाइलाइ उदेश्य तर्फ तान्यो । यसो गर्नाले तपाइँलाइ आभास हुन्छ कि तपाई सहि बाटोमा हुनुहुन्छ र अझै उदेश्यको नजिक पुग्दै हुनुहुन्छ यसो गर्दा जिन्दगीका आगामी दिन अझ सहज लाग्न सक्छ ।
५) भोलि के गर्ने ?
जव हामी केहि काम गर्न चाहन्छौ तव हामी त्यसको लागि पुर्व तयारी गर्ने गर्छौ । त्यसरी नै भोलिको पनि पुर्व तयारिको लागि मानसिक तयारी गर्नाले तथा दृष्टिकोण तयार पार्नाले शरीर र दिमागलाई तनाव कम हुन्छ । यदि तपाईं भोलि कुनै समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई आत्मविश्वासको साथ कसरी सम्हाल्ने भन्ने बारे सोच्नुहोस योजना तयार गर्नुहोस किनकि भोलीको दिनमा सम्भावित समस्या समाधान गर्न सहज होस् र तयारीका साथ आरम्भ गरिएका कार्य नै सफल हुन्छन ।